Ukuze abashayeli abachitha isikhathi esiningi beshayela, futhi nje labo bayathanda ukuhamba RV kubaluleke kakhulu ebusuku. Ukuma, ukuphumula ngokwanele futhi ukululama kubaluleke kakhulu ukuphepha ukuhamba endleleni. Ngokwesibonelo, abashayeli abahamba kusuka eMoscow kuya Novorossiysk kubaluleke kakhulu ukuze uphendule lo mbuzo: "Kuphi ukuhlala ubusuku ? Lo M4 onguthelawayeka"
ithrekhi ngamunye has izici zayo siqu ezakha izici zawo, ukhuluma ngani izinga komzila womgwaqo, ukuphepha sezulu esibi, ubuhle ezizungezile landscape nekhwalithi yesevisi.
M4 "Don", ukubuyekezwa lapho iphikisana kakhulu, has a ubude 1589 km, futhi ikhilomitha abashayeli indlela ngayinye ube umbono wabo siqu. Ngale ndlela kunalokho eside kusuka eMoscow kuya Novorossiysk amanga ezifundeni ezinkulu ezimbalwa nje: Moscow, Tula, Lipetsk, Voronezh, Rostov futhi Krasnodar esifundeni.
Kusobala ukuthi indlela M4 kumephu kweqa imifula emikhulu njenge-Oka, uDon, Beautiful Sword, Pine, Seversky eDonets, Kuban, futhi Voronezh Reservoir. Eqinisweni, ngokusebenzisa emfuleni ibhuloho umthwalo esithwele amandla amathani 80. Ukuze ngokushesha ukunyakaza eyakhelwe dlula imigwaqo ukushiya amadolobha amakhulu njenge Voronezh, Rostov-on-Don futhi Krasnodar, ngemuva ukungena ngaphandle kwabo. Ngokwemvelo, for abashayeli bamaloli futhi abashayeli ke umbuzo obaluleke kakhulu: "Kuphi ukuhlala ubusuku bonke M4 ekudleni ikhwalithi ubuthongo obumnandi"
Ikhwalithi imigwaqo kanye isiminyaminya
izinga umgwaqo kunqunywa izici eziningana:
Okokuqala, umgwaqo ukuvundulula uqobo. On the M4 kuyinto izinga okusezingeni futhi ikuvumela ukufinyelela isivinini kuze kufinyelele 130 km / h lapho kuvumelekile.
Okwesibili, zezokuvikela, ebizwa ngokuthi ebonakalayo kuhlukane line, uthango kahle indlela yokuwela yabahamba ngezinyawo futhi amarobhothi lapho ukubonakala ayiyinhle. Kubalulekile futhi ukuba khona ematfuba emaweni. M4 "Don" (unomphela isihambi Izibuyekezo siliqinisekise) has kwezinye izindawo eziyingozi, okuyinto ungathola ngendathane noma lapho ukuvaleka singenzeka ngenxa esindayo iqhwa emigodini. Kwenzeka kaningi lapho kulo mzila yavalwa izinsuku ezimbalwa ngenxa yesimo sezulu esingesihle.
Okwesithathu, umthwalo kwamaloli nezimoto uma zidlula ngezikhathi ezahlukahlukene onyakeni. Nakuba indlela M4 kumephu sibukeka sisihle futhi ephephile, kodwa empeleni futhi quality enhle kakhulu, kodwa lokho akusho ukusingatha umthwalo, ikakhulukazi ehlobo. Ngakolunye uhlangothi, imoto eliqhutshwa nohide izivakashi kolwandle, ngakolunye - eningizimu amaloli baphathe izithelo nemifino eMoscow nakwamanye amadolobha. Jams, amahhotela eziminyene, izingozi - konke lokhu kuthinta kakhulu isimo umshayeli, Ngakho-ke umbuzo oyinhloko ngalesi sikhathi kulapho ukuhlala ubusuku bonke M4 onguthelawayeka.
Okwesine, izinga ithrekhi futhi inquma inkonzo yonke indlela. Kusukela endleleni kusuka eMoscow kuya oLwandle Olumnyama eside ke refueled, indawo yokuhlala, ukudla, cafe, izibhedlela noma izindawo usizo ngokushesha kufanele zitholakale endleleni imoto noma yokulandela amamitha ambalwa emgwaqeni. umshayeli Ukhathele - usongo lonke ekusakazeni ezokuthutha iphelela. Ngenxa yale ngozi, hhayi kuphela kwashona abantu, kodwa futhi ukuze umise yonke i-traffic incazelo ephelele ngezimo zale ngozi.
Lezi izinkomba main izinga ithrekhi, kodwa eqinisweni kunabaningi, futhi isici main ukhuluma ngani indlela isimo - ke umuntu.
izigaba ayingozi umzila M4
Nakuba i-M4 ithrekhi 4 ifakwe imizila ezibanzi delimited ube izigaba lapho ukushintsha kumugqa 2, lapho isivinini lilinganiselwe, futhi kuyomfica akuvunyelwe. Ukuze uphephe traffic endleleni kukhona amakhamera umgwaqo ezithwala traffic okuthunyelwe amaphoyisa konke kwenzeka ngesikhathi ukunyakaza. Uma umshayeli enquma esiyingozi igebe umgwaqo dlula, wamane ashaqa amakhasethi amalungelo kufanele zibuyiselwe ngemuva kokuphela kwesivivinyo nesijeziso izinkokhelo.
Njengoba kuphawuliwe ngabashayeli ngokwabo, ezindaweni yenkungu ezisebusweni 26 th, 49 th, 95 th futhi 364 km th, futhi kuba idatha ethembeke kunazo zonke labo ukushayela lapho njalo.
Ingxenye yendlela eduze M4 onguthelawayeka - iziteshi toll, kodwa zimbalwa futhi zimfushane. Imali incike isikhathi sosuku, isigaba kanye umthamo imoto:
Izimoto nge trailer up 2 m noma cha, izithuthuthu ungakwazi ukushayela ruble 30 no-50.
Pickups, ezimotweni, mini-ezimotweni naphakathi no-usayizi izimoto uzokhokha ruble 45 no 75.
Amabhasi iyiphi isigaba, imishini ukuthwala wezimpahla enkulu ukukhokha 60 futhi $ 100, kanti uma izimoto wosayizi omkhulu, futhi amabhasi Kwekilasi 2, ukubheja kuyoba ruble 120 no-200.
yamanani amabili ukhombise imini nobusuku lemali yokukhokha, futhi wonge imali kwi-M4 onguthelawayeka, izigaba umzila okhokhelwayo unga "ukulala" nganoma iyiphi ehhotela.
Amagalaji, iziteshi yezokwelapha futhi okuthunyelwe DPS
Ngokusho ezingeni kwengqalasizinda kanye nekhwalithi yesevisi ukunquma endleleni abashayeli induduzo. Njengoba kusuka eMoscow kuya oLwandle Olumnyama, ibanga elide, kubalulekile ukuthi umshayeli uthole edingeka khona kakhulu, ngaphandle zokuchitha isikhathi kuso.
M4, bamsola ngokuthi ngcono izinga kwamakhasimende njalo ngonyaka, okwenza indlela yokushayela wokujabulisa. Uma ngaphambi amagalaji ubengase ukugcwala, kodwa namuhla liphinde indawo nge mini-layout, lapho ungakwazi ubuyise amanzi nokudla, yangasese, nanjengezihlambi luphole futhi iqalele kabusha.
On the M4 cishe zonke 20-30 km kuthiwa refueling, emagalaji, ikhefi futhi yokupaka sokuzilibazisa, amamotheli namahhotela. Imitholampilo, ngeshwa, uhlangabezana lingandile kangako kuka okuthunyelwe amaphoyisa.
Ukuze uphephe traffic M4 onguthelawayeka ihloliwe, ngokungagcini nje ngokubashumayeza CCTV, okuxhunyanwa amasignali kwizinto yesevisi umgwaqo, kodwa futhi imishini ukuhlolwa nezimpahla siqu abagibeli nabashayeli. Konke lokhu kwenziwa ukuze kuzoncipha ukuthuthwa okungenzeka kukagwayi noma izimpahla akuvumelekile.
onguthelawayeka Ingqalasizinda M4
Lapho abashayeli ecabanga lapho ukuhlala ubusuku bonke M4 onguthelawayeka balindela ukuthola indawo ukudla ezenziwe ekhaya okumnandi, igumbi ahlanzekile ukhululekile nge embhedeni esithambile futhi zikhululekile.
Akubona bonke izindawo emzileni kusuka eMoscow kuya Novorossiysk kuthiwa ngeqholo ngokuthi ehhotela, motel noma ehhotela. Izimpendulo ezivela abashayeli, eziningi izindawo, kubalwa ukuthi umshayeli ikhathele fastidious nokufuna izinto ngenkani, futhi abagibeli bayakwazi lapha namuhla, akusekho kusasa, ukuze bakwazi angeke ngokuthi amaklayenti sina.
Kodwa zikhona eziningi izindawo nokuzilibazisa, okwakusho belungile ukuvakashela ezingaphezu kwesisodwa, futhi njalo izivakashi.
Motels e Tula esifundeni
Ngo Tula esifundeni zikhona izindawo eziningana ukungcebeleka, ngasinye okufanele ukunakwa abashayeli. Eduze komunye nomunye kukhona amamotheli Amahhotela abahambi kukhona amanzi hhayi kuphela ashisayo kanye yangasese, kodwa futhi induduzo, ukunakekela nokunakekela.
On the km 238th itholakala ehhotela eziyinkimbinkimbi "Ryabinushka". Lapho abashayeli kungaba ukubuyelwa amandla abo e Russian umusi okugeza, bese ukuthatha umphefumulo umdlalo pool emva kokudla okumnandi. cafe Omkhulu inikeza Ukukhetha eziningi izitsha ngesikhathi intengo imali, eyinkimbinkimbi has a igalaji, lapho kungenzeka ukulungisa imoto. Laundry ikuvumela ukuletha izinto ukuze, futhi izisebenzi ezama ukwenza yonke mahamba-nendlwana ukusiza kwesokunxele kusukela ehhotela waphumula, waqabuleka futhi uqaphile.
embhedeni-1-4 amakamelo zonke Izinsiza for ubuthongo ukhululekile nokuzijabulisa.
On the 241 km th komgwaqo kuyinto motel "Rus", okuyinto futhi uzimisele ngempela nezidingo zamakhasimende. Awukwazi nje ayeke ukuba baphumule ubusuku, kodwa nje ushawa futhi ukudla labo ngokushesha.
Amakamelo egqamile futhi ethokomele nazo zonke Izinsiza, okugeza isiRashiya, ezihlukahlukene enkulu izitsha okuzenzela ukwenza motel "Rus" endaweni emnandi, lapho ufuna ukuya khona futhi.
Motels Lipetsk esifundeni
Lipetsk esifundeni, futhi, uzokubona abashayeli M4 onguthelawayeka. Ihhotela "Iparele" futhi "yendiza", etholakala lapha, babe omisiwe zabo, owaziwa ebona avtoputeshestvennika.
The main "iqhinga" "Amaparele" ukuthi itholakala emva esinengekayo ezincane, okuyinto kudala banenkolelo yokuthi ithrekhi endaweni ethile kude. Lapha, iwashi has a cafe nge ekhaya yokupheka (isobho, noodle, hashi ehlobo, eyosiwe, chops, nokuningi). samakamelo ahamba ngamabili kanye en suite izindawo, a kathathu, ne toilet eshaweni phansi. ifenisha upholstered, elihlanzekile, i-TV kanye ihora ibha unike amandla umshayeli ukulala, kodwa abagibeli - nesikhathi esihle.
Lokhu AN-24 kuyinto ubuso eziyinkimbinkimbi ehhotela "yendiza". Lesakhiwo kuyinto ngiyabonga ukuphumelela ngoba cuisine esiphundu futhi ezingabizi, amakamelo ethokomele, enhle endaweni elicwengiweyo nge flower imibhede umthombo. Lapha ungakwazi ukulalela siphile umculo ubuthongo obumnandi.
Motels Voronezh esifundeni
Voronezh M4, amamotheli zazo esisogwini 477-th ikhilomitha 679-th, has iqoqo eyinkimbinkimbi ehhotela "Galkino" nge ezahlukene amasevisi. Kuleli zwe wenduduzo lula sibonisa yokubhukuda, ifenisha upholstered, oqinisekisa ubuthongo obumnandi, ukudla okuhle, sauna amabhiliyade. Yini ngaphezulu kufanele kube isihambi ukhathele ngoba ukuphumula?
Ihhotela kuyinto "Ubuningi" phezu km 518th umzila is fully ufaneleke igama layo. Modern amakamelo esimisiwe kahle, ngamunye ofakwe isitayela sakhe, ukudla okuhle, sauna, eliphezulu upholstered ifenisha - konke lokhu kwenza isifiso ngokuphindaphindiwe ukuza lapha ukuze uphumule.
Motels Rostov esifundeni
Rostov-M4 ithrekhi inikeza abalandeli izithuthuthu kanye rock, hhayi kuphela kubo, okumangalisayo ukhululekile kanye cafe ehloniphekile. Mayelana nale ndawo singasho ukuthi unakho konke ukuze siphumuze ingqondo, ukudla okumnandi futhi esihlwabusayo, ukuzihlanza, owezokuThutha konke rocker ibhayisikili-isitayela. Wakhumbula motel yokuqala nje kuphela, kodwa abasebenzi yakhe emangalisayo.
Ukuze abahambi abafuna nje uyolala ebusuku uhambe futhi ukuphumula, M4 onguthelawayeka (Rostov esifundeni - omunye walabo ukuthi kweqa) ". White House" ihhotela inikeza Wonke umuntu angakhetha cottage umphefumulo noma nje igumbi kuwo, ukudla ukudla okuphekwe ekhaya, futhi ungakwazi oda konke kusengaphambili, ukuze ukufika ukudla okushisayo futhi esihlwabusayo uzobe elinde amakhasimende. kumakhabheni Hlanza ukhululekile isidumbu ngesikhathi intengo imali yenza sikwazi lapha hhayi kuphela ukuhlala, kodwa futhi sibe lonke izinsuku ezimbalwa.
Phakathi izindawo ezingcwele ukuthi ungavakashela ngenkathi ushayela eduze M4 onguthelawayeka, kufanele kuphawulwe Kostomarovskaya emhumeni sezindela kwabesifazane nabesilisa Divnogorsky Assumption Monastery. Labo abafisa ukujabulela ubuhle bemvelo, kuyohlale ukukhumbula dolmens eliyimfihlakalo Krasnodar esifundeni, okuyinto iminyaka engaphezu kuka-6000, nezimpophoma emfuleni uJanet.
Yini eyayibangele lokho - kodwa ngubani lo? Lowo okonile emthethweni lobugebengu zenqubo